CIIDANKA C.I.D OO XALAY XARUNTOODA UGU YEEDHAY MAAMULKA WARGEYSKA OGAAL | Saxil News Network
CIIDANKA C.I.D OO XALAY XARUNTOODA UGU YEEDHAY MAAMULKA WARGEYSKA OGAAL
Hargeysa( Saxil.com)-Taliska ciidanka dembi baadhista ayaa shalay gelinkii hore yimi xafiiska wargeyska Ogaal, isla markaana xalay fiidkii xaruntooda ugu yeedhay maamulka wargeyska, halkaas oo ay wax kaga waydiiyeen warar ku saabsan mawduuca haamaha shidaalka oo warar la xidhiidha wargeysku qoray.
“ Hadh soo korkii ayaa la ii sheegay in xafiiska Ogaal ay ciidanka C.I.D yimaadeen, kadib waan la xidhiidhay, waxaanan waydiiyay waxay u socdeen, waxay ii sheegeen inay doonayaan maamulka, markaa ma na soo mari kartaa ayay igu yidhaahdeen, aniguna waxaan u sheegay in aan u iman doono berri(maanta), haddii kale ay galabnimada noogu yimaadaan xafiiska.” Sidaa waxa yidhi gudoomiyaha wargeyska Muuse Faarax. Wuxuu intaa ku daray oo uu yidhi gudoomiyuhu; “Fiidkii xalay ayaa sarkaal ka socda C.I.D noogu yimi xafiiska, wuxuu sitay warqad yeedhmo ah oo maxkamadu soo qortay. Markaa anagoo wada joogna ayaa sarkaal ka sareeyay nala soo xidhiidhay, waxaanay naga codsadeen in aanu xafiiskooda u raacno, siday doonayeen baanu u yeelay, markaan tegay xafiiskoodana waxay wax iga waydiiyeen warar wargeysku ka qoray arrimaha wareejinta haamaha iyo kartoonka carraale waddani ee wargeyska ku soo baxa, aniguna waxaan ugu jawaabay wixii wargeysku qoray waa intaa aad haysaan.”
Gudoomiyuhu wuxuu intaa ku daray, in arrintoodu baadhis kiis la xidhiidhay, isla markaana uu xog ku helay in dacwaddani ka timi dhinaca madaxtooyadda, isla markaana ay la xidhiidho warar iyo dareenadda shacabka ee la xidhiidha mawduuca haamaha oo uu baahiyay.